အလင်းရောင်ကြယ်များ: September 2012
***အင်တာနက် မင်းသမီး မဖြစ်စေဖို့ ***(အမ ညီမ အန်တီ....မိန်းကလေးများ ဖတ်ပေးပါရန်)
အခုခေတ်မှာ လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် နေပြီဖြစ်တဲ့ အင်တာနက်ရဲ့ ကောင်းကျိုး တွေကတော့ ဖော်ပြလို့ မကုန်နှိုင်အောင် များတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အင်တာနက် နည်းပညာ တိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေလဲ မခွဲမခွာတွဲပါ လာတာကိုလဲ မြင်နေရ ပြန်ပါတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ အဆင့် အလှမ်းကွာနေတဲ့ spyware, mailware, virus စတာတွေကို မပြောလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့ မျက်စိထဲ ကန့်လန့်ဝင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာက အမျိုးကောင်းသမီး တွေရဲ့ ဘာညာကိစ္စ ဓါတ်ပုံ/ဗီဒီယို များစွာကို ကာယကံရှင် မသိပဲ အင်တာနက်ပေါ်မှာ စေတနာ ကြီးမားစွာနဲ့ ဝေငှ (share) အလုပ်ခံနေရတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါကို ဒီအတိုင်း ထိုင်ကြည့် နေ လို့တော့ မဖြစ်တော့ ဘူးထင်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/30/2012 10:09:00 am No comments:
ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းများ တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရန် တောင်းဆိုသွားမည်
ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းများ တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့် မရသော မြန်မာနိုင်ငံတွင်
ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း (လိင်လုပ်ငန်း)များ တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရန် လွှတ်တော် အမတ်များထံတင်ပြ တောင်းဆိုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ပြည့်တန်ဆာများ
ကွန်ရက် (Sex Worker In Myanmar Network) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်နှင်းနှင်းယုက ပြောကြားသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/30/2012 08:24:00 am No comments:
ဒုက္ခပေးနိုင်သည့် လိပ်ခေါင်း (ဘယ်လို ကုသမလဲ)
ကျွန်မတွင် လိပ်ခေါင်းဝေဒနာခံစား နေရပါသည်။ လိပ်ခေါင်းရောဂါအကြောင်းကိုသိချင်ပါသည်။ကျွန်မလိပ်ခေါင်းသည် 1cm ခန့်ရှည်ထွက်နေပါသည်။ ပထမတွင် ဆရာဝန်နှင့်ပြရာ မသက်သာပါ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/30/2012 05:07:00 am No comments:
နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဖြစ်တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားကို အစ္စလာမ်ဇာတ်သွင်းခဲ့၊
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်တွေ ၊ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုးတွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့မူလအင်ဒိုဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကို နိုင်ငံ့လူဦးရေရဲ့ ၀.၈% ပဲကျန်တော့ တဲ့အထိ ဗျင်းထားရုံတင်အားမရဘူး။အခု နောက်ဆုံမူလအင်ဒိုဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီကြီးသဖွယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ) ရှေးဟောင်း စေတီ အဟောင်း အပျက်ကြီးသဖွယ်သာ ကျန်ရှိတော့တဲ့ Borobudur စေတီကြီးကို ပါဖျက်ဆီးဖို့ ကြံနေပါပြီ။အရင်တစ်ခါလည်း Borobudur စေတီကြီးကို မူဆလင်တွေ ဗုံးတက်ခွဲခဲ့ပြီးပါပြီ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/29/2012 05:42:00 am No comments:
ယေရှု တွင်ဇနီး ရှိခဲ့ကြောင်းအထောက်အထားထွက်ပေါ်လာ
အမေရိကန် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ တစ်ဦးသည် လေးရာစုခန့်က ရေးသားခဲ့ဖွယ်ရှိသော စက္ကူပုရပိုက်တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရာတွင် ယင်းပုရပိုက်တွင် ရေးသားထားသော စကားလုံးအချို့အရ ယေရှု တွင် ဇနီးသည်ရှိနိုင်ကြောင်း သက်သေခံအချက်အလက်များတွေ့လာရသည်ဟု
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/29/2012 05:17:00 am No comments:
စင်္ကာပူနဲ့ မလေးရှားလာသင့် မလာသင့် ငြား??????
ဘလောက်ဂါ ဇင်ဝေသော်ရဲ့ စာတမ်းလေးကို ဗဟုဟုတဖြစ် လက်ဆင့် ကမ်းဝေမျှယင်း
စာမဖတ်မှီ ကျနော်ဂေါ်လီမှ အပိုဆောင်းစကားလေး ထပ်ဆင့် လိုက်ပါတယ်၊
နိုင်ငံခြားဆိုတာ ဘယ်လူမဆိုလာချင်တဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ...
ဘာပြောပြောမြန်မာပြည်ထက်သာလို့နိုင်ငံခြားထွက်ပြီးစီးပွားရှာဖွေခြင် ကြသလို၊ငွေကြေး
အတိုင်းတာရှိတဲ့ လူတွေကလည်း။ဟန်းနီးမွန်းသော်၎င်း၊ရှော့ ပင်း သော်၎င်း၊ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု့ သော်၎င်း၊ဘာတွေ
များရှိနေပြီး၊ဘယ်လိုတွေစားပြီးဘယ်လိုလူတွေပုံလည်းဆိုတာ၊ဗဟုစုတဖြစ်လေ့ လာချင်တဲ လူတွေလည်း
ကျနော်ဂေါ်လီတို့နေထိုင်တဲ့ မလေးရှားကတော့ထိုင်းနိုင်ငံထက်စာယင် ငွေကြေးဆယ်ဆကွာတယ်၊
မလေးရှားကအင်မတန်လွတ်လပ်ပြီး ဝင်ထွက်လွယ်ကူပြီး ။အင်တာနက်ကို အကန့် သတ်မရှိ သုံးချင်သလို
သုံးလို့ ရတယ်၊တော်တော်များ ဘလောက်ဂါတွေ၊နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ပျော်မွှေ့ စံရာနေရာပေါ့ ၊
၅တန်းလောက်အောင်တဲ့ လူ၊မလေးရှားတစ်နှစ်ရောက်ယင်၊လက်တော့ ပ်ကိုယ်စီနဲ့ ၊ဂျီတောလ်၊ဖေ့ စ်ဘုတ်
ပိုက်ဆံရှိယင်၊ဘိန်း၇ှုမလား၊အရက် ဘီယာအစုံချမလား၊လောင်းကစားအစုံလုပ်မလား၊မိန်းမတရားမဝင်ယူမလား၊မကျေနပ်လို့ လူရိုက်ခိုင်းမလား
လည်သူစား အတဲ့ လူခံပေါ့ ၊ရိုဟင်ဂျာတွေ၊လူမဲတွေ၊တစ်ချို့မြန်မာပြည်ကနေအပြီးတိုင်
အနောက်နိုင်ငံကို လစ်ဖို့ U.N ဝင်ပြီးတော့ခိုနားရာတစ်ထောက်စခန်းဆိုလည်း မမှာပါဘူး၊
မိမိနိုင်ငံသိက္ခာကျမှာစိုးလို့ သာထုတ်မပြောချင်တာရှိမယ်၊မြန်မာပြည်ရောက် မလေးရှားပြန်လူငယ်တွေ
အကုန်သိပါတယ်၊ဒါ့ ကြောင့် မလေးရှားအပိုင်းကတော့ ၊ဒီလောက်နဲ့ ပဲ ဖေါ်ပြမယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံကိုတော့ အောက်ပါအတိုင်းဆက်ဖတ်လေ့ လာသွားကြပါ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/26/2012 10:28:00 am No comments:
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/24/2012 10:32:00 am No comments:
လီကွမ်ယု ပြောတဲ့ နိုင်ငံအတွက် အနှောင့်အယှက် အစ္စလာမ်မစ်
လီကွမ်းယူနဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာ (အင်တာဗျူး)
မေး ။ ။ မစ္စတာလီရဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ စုပေါင်းညီညွတ်စွာ နေထိုင်ရေးမူဝါဒဟာ (၄၅) နှစ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ စင်ကာပူရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ပါပဲ။ စင်ကာပူရဲ့ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ ၁၉၆၅- ခု၊ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့က ပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာ စင်ကာပူဟာ မလေးရှားမဟုတ်၊ ချိုင်းနား (တရုတ်) မဟုတ်၊ အိန္ဒိယမဟုတ်လို့ ကြေငြာအသိပေးခဲ့တယ်နော်။ နောက်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်ရင် ဒီလမ်းစဉ်ပေါ်မှာ .
အောင်မြင်မှုရအောင် ဘယ်လိုအစချီခဲ့ရသလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါလား။
ဖြေ ။ ။ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အတိုက်အခံမဖြစ်ချင်ပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောခဲ့ရတယ်။ အစ်စလမ်တွေ မများလာခင်အထိ ငါတို့နိုင်ငံဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းပဲ တိုးတက်လာခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့်များလဲလို့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/24/2012 09:08:00 am No comments:
ကျက်သရေမရှိမြန်မာအထီးကောင်နှင့် ဂန်ဒူးမမ မဂ်လာဆောင်ခြင်း
မြန်မာအမျိုးသား ၂ ဦး လက်ထပ် မင်္ဂလာဆောင်ကြသတဲ့ ဗျာ ဘယ်လိုဘယ်လူတွေလည်းမသိပါဘူး
မိမိလူမျိုးကိုချစ်တာတော့ မှန်ပါတယ်...အား---စိတ်လေတယ်--ကိုယ့် ဘာသာဆက်ဖတ်ပေတော့ 
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/24/2012 06:35:00 am 1 comment:
ဒီပဲယင်းအရေးခင်းမှာဒေါ်စုအသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့ လူအစစ်မှန်တွေ့ ပြီ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အသက်ကို ကယ်လိုက်သူ ကိုတိုးလွင်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/24/2012 05:23:00 am No comments:
မဟာမုနီရုပ်ရှင်တော်မြတ် သမီုင်း အကျဉ်းချုပ်
မြတ်စွာဘု ရား သက်တော် ထင်ရှား ရှိစဉ် သာဝတ္တိပြည် မှ ရက္ခပူရ တီုင်း ဓည၀တီ ပြည် သို. နောင်ပါတော် ရဟန္တာ ၅၀၀ နှင့် ဒေသစာရီ ကြွ ချီ တော် မှုလေပြီး သေလာဂီရီတောင် တွင် သတင်းသုံး စပ္ပာယ် တော် မှု လေ သည်..။
ဓည၀တီ ပြည့် ရှင် စန္ဒာသူရီယ မင်းကြီး သည် သေလာဂီရီတောင် တွင် မြတ်စွာဘုရား ရှင် သီတင်းသုံး နေ သည် ကို ကြား ကာ သွား ရောက် ဖူး မျှော် ကြည်ညို ပြီး ရွှေနန်းတော် သို. ပင့်ဆောင် ၍ အထူးထူး သော ဆွမ်း ဘောဇဉ် တို.ဖြင့် ကပ်လှူပူဇော် ပြီး သော အခါ မင်း နှင့် တကွ တီုင်းသူ ပြည် သား များ ကို တရား ရေအေး တိုက်ကျွေး တော် မှုလေသည်..။တရားတော် အဆုံး တွင် ဓည၀တီ ပြည်ရှင် စန္ဒာသူရီယ မင်းကြီး က
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/24/2012 01:04:00 am No comments:
KTV ၊ (မာဆက်) အနှိပ်ခန်း၊ စားသောက်ဆိုင် များတွင် လှည့် လည် ဖျော်ဖြေ ရေးးအသွင်ဆောင်နေကြတဲ့ မော်ဒယ်မလေးများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်..၊
အဆိူ ပါမိန်းကလေးများမှာ များသောအားဖြင့်ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/24/2012 12:26:00 am No comments:
၂၃-၉-၂၀၁၂နေ့ တွင်မလေးရှားအခြေပြု N.L.Dမှဆရာမြတ်ကိုကိုမှ၅နှစ်မြောက်သံဃာတော်များဆပ်ကပ်လူဒါန်းပွဲ
၈၈အရေးခင်းထဲမှစပြီး ဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ယုံကြည်ချက်ဖြင့်မြန်မာပြည်မှာ အချုပ်ထောင်အကျဉ်းကျခံခဲ့ ရပြီး ဘဝကိုကြံ့ ကြံ့ ခံ၍ ပြည်သူတွေအတွက်ယနေ့ ထိတိုင် ပေးဆပ် လှုပ်ရှားနေသောN.L.D မှ မလေးရှားရောက် နိုင်ငံရေးကျောင်းသားဟောင်းဆရာမြတ်ကိုကိုဖြစ်ပါတယ်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/23/2012 11:46:00 pm 1 comment:
သတင်းစာတွေလည်းဖတ်ရတာ စိတ်ကလေးလန်းသွားအောင် ဟာသလေးတစ်ခု တင်ပြလိုက်မယ်
အများသုံးအိမ်သာထဲဝင်ပြီး... ကမုတ်ထဲ ထိုင်ရုံရှိသေးတယ် ဟိုဘက် အိမ်သာထဲကလူက လှမ်းနှုက်ဆက်တယ်..
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/22/2012 11:39:00 am No comments:
ရွှေတိဂုံဘုရားပုံတော် နှင့် အရက်ပုလင်း
မလေးရှားနိုင်ငံ Teo Seng Chan အရက်ကုမ္ပဏီက သူတို့ရဲ့ထွက်ကုန်တခုမှာ
ရွှေတိဂုံဘုရားပုံ တံဆိပ်ကပ်ထားကြောင်း သူတို့ဝက်ဆိုက်မှာ ရှိတဲ့ ပုံအရသိရပါတယ်။
ဒီကုမ္ပဏီက အရက်မျိုးစုံကို တံဆိပ်မျိုးစုံထုတ်ပါတယ်၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ နဲ့
ရှေ့ သို့ ဆက်ဖတ်လိုက်ရအောင်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/22/2012 11:21:00 am No comments:
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ စကားကြွယ်ဝပါတယ် တော်ကီ တွေလည်းညုက်သလို အထာစကား
ဘန်းစကားခေါ် အီဒီရမ်စကားတွေလည်း တပ်ပါတယ်၊ကိုဂေါ်လီလည်း ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ
သားကြီးတို့ လေ့ လာထားနော်
အဘကတော့ဒီတော်ကီတွေနဲ့ 
အဘတို့ တုံးက လည်းအဘမိန်းမကို
ဒီတော်ကီတွေနဲ့ပွားခဲ့ ဘူးတယ်..
ဆက်ဖတ်လိုက်အုန်းနော် (က)ကြီး အက္ခရာမှ( အ) ထိရေးထားတယ်၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/22/2012 09:59:00 am No comments:
မြန်မာနိုင်ငံမှဒုတိယကမ္ဘာစစ် သမိုင်းဝင်နေရာ - (၂)ခု နှင့် ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံးတံတား
သံဖြူဇရပ် မဟာမိတ်စစ်သင်္ချိုင်းသည် သံဖြူဇရပ်-ကျိုက်ခမီသွားကားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။
အကျယ်အ၀န်းမှာ ၁၀ ဧက ခန့် ဖြစ်သည်။ အုတ်ဂူငယ်ပေါင်း ၃၇၇၁ ခုပါဝင်ပြီး ၁၉၄၆ ခု ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ တွင်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/22/2012 09:21:00 am No comments:
ဤပုံတွေကို ကြည့်ပါ။ မည်သူမျှ အလှရိုက်ပေးထားခြင်း မဟုတ်။ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် ရိုက်ထားကြတာပါ။ ဒီပုံတွေ အွန်လိုင်း ပြန့်လာတဲ့ အခါ ဘလော်ဂါတွေ တင်တယ်လို့များ ပြောဦးမလား။ အရင် ဝေမျှပေးတဲ့ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်ပဲ အပြစ်တင်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ကတောင် သူများကို ဒီလိုပုံတွေ ပေးတာ။ ပြန်တင်တဲ့ ဘလော်ဂါတွေ အပြစ်လား။ ကိုယ့်အပြစ်သာ ကိုယ်ခံလိုက်ကြပါ။ ဒါမှမဟုတ် ရင်သားကြီးတာကိုများ ဂုဏ်ယူချင်လို့ ကြွားချင်လို့ အွန်လိုင်းတင်လိုက်တာလား သဉ္ဖာရယ်။ ပုရိသတွေ ...အကြိုက်မျိုးဆိုတာကတော့ အသေအချာပဲ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/22/2012 03:29:00 am No comments:
ဘဲငါးရာတောင်ရတနာသိုက် ခေတ်မီနည်းပညာဖြင့် ရှာတွေ့ပြီ
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၉- ရခိုင်ပြည်နယ် ဘဲငါးရာ တောင်အနီးမြှုပ်နှံထားသော ဘုရင့်ရတနာ သိုက်ကို ခေတ်မီ High Tech (NASA-Technology Digital Image)နည်းဖြင့် ရှာ ဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/15/2012 10:32:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ကျပ် ၅၀၀၀ တန်ငွေစက္ကူအတု ပြသနာများမှာ နယ်စပ်ဒေသများတွင်သာ
အများဆုံးဖြစ်ပွားနေပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားမှုနည်းပါး နေသော်လည်း ငွေတုများ အလုံးအရင်းဖြင့် ၀င်ရောက်နေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါက လက်ရှိညွှန်ကြားထားသည့်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/11/2012 08:01:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
From : အောင်ခမ်း
စကားပြောဆိုရုံ Chatting, ရုပ်မြင်ရုံ ဗီဒီယိုChatting တင်မဟုတ်တော့ပဲ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/11/2012 07:23:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
- ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ ဆိုင်ကယ် မစီးရဘူးဆိုတာ ဘာကြောင့်လဲ
- 21,8 , 2012
ဂျပန်နိုင်ငံ ယာမဟာ ဆိုင်ကယ်ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆိုင်ကယ်အရောင်းစင်တာ လာရောက် ဖွင့်လှစ်တော့မယ်လို့ မကြာသေးခင်က သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး မြို့တော်မှာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/10/2012 06:24:00 am 1 comment: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဘလောက်ရေးတယ်ဆိုပြီး နေရာတစ်ကာမှာ ဆရာကြီးလိုက်လုပ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး
တစ်လောက မြန်မာပြည်ကို ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ခေတ္တမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်.
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/09/2012 04:17:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
စက်တင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၂၊ YPI
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို ပုံစံအသစ်ဖြင့် ယနေ့ပြန်လည် ဖေါ်ပြလိုက်ရာတွင် ပြည်သူ့အသံဟူသည့် ပြည်သူများ မကျေနပ်ချက်ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ အင်တာနက် အွန်လိုင်းမှတဆင့် တင်ပြတိုင်ကြားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့အသံ ဟအမည်ပေးထားသည့် ကဏ္ဍတွင် တိုင်ကြားမည့်သူအနေဖြင့်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/07/2012 09:55:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဒကာမ နဲ့ Kissing ရိုက်..ပေါင်ကိုပွတ်..ချဲဂဏာန်းပေး.ဒါလား ရဟန်း
မန္တလေးတိုင်း ၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ် ရှိ သက်ကြားအို ရဟန်းတစ်ပါးသည်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/07/2012 07:30:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ရခိုင်လှုမျိုးရေးဘာသာရေးဖိနိပ်မှု့ လက်သည်တရားခံရှာတွေ့ ပြီ
From : Tharthar Thartharlay
ယခုပြသနာအစသည်ကားရှေ့ဦးစွာစတင်ခဲ့သည်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေးလိုလားသော အစွန်းရောက်ရခိုင်ပါတီ(RNDP)မှအ၀ကျွန်းသားရခိုင်ဘင်္ဂလီဦးအေးမောင်နှင့်၎င်းတို့လူများကြောင့်ဖြစ်သည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/05/2012 07:32:00 am3comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 9/03/2012 08:25:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
***အင်တာနက် မင်းသမီး မဖြစ်စေဖို့ ***(အမ ညီမ အန်တီ....
နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအဖြစ်တဲ့ အင်ဒ...
လီကွမ်ယု ပြောတဲ့ နိုင်ငံအတွက် အနှောင့်အယှက် အစ္စလာမ...
ကျက်သရေမရှိမြန်မာအထီးကောင်နှင့် ဂန်ဒူးမမ မဂ်လာဆောင...
၂၃-၉-၂၀၁၂နေ့ တွင်မလေးရှားအခြေပြု N.L.Dမှဆရာမြတ်ကို...
မြန်မာမိန်းကလေးများ online ပေါ်တွင် sex ကိစ္စပြောဆို...
- ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ ဆိုင်ကယ် မစီးရဘူးဆိုတာ ဘာကြေ...
ဒကာမ နဲ့ Kissing ရိုက်..ပေါင်ကိုပွတ်..ချဲဂဏာန်းပေး...